KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Khasaaro ka dhashay Weerar lagu qaaday goob lagu daawanaya Ciyaar - Muqdisho
Sunday 9 December 2012 09:46
Khasaaro ka dhashay Weerar lagu qaaday goob lagu daawanaya Ciyaar - Muqdisho
Muqdisho (KON) - Kooxo Hubaysan ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen goob ciyaar lagu daawanayay oo ku taala degmada Wadajir ee gobalka Banaadir, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro.
Weerarkaan ayaa ahaa Bamba gacmeed sida ay ku waramayaan dadka goobjoogayaasha ah ee halkaasi ku sugnaa xiligii weerarkaan uu dhacay habeenkii xalay.
Inta la ogyahay ilaa iyo 10-ruux ayaa ku dhaawacantahay weerarkaan lagu qaaday goobta lagu daawanayay ciyaaraha waxaana dadka dhaawacmay ay ku badnaayeen dad dhalinyaro ah.
Mas’uuliyiin katirsan maamulka degmada Wadajir ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay kadib markii falku dhacay iyagoo ugurmaday dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi kuwaasi oo loola cararay cusbitaalka Madina Muqdisho.
Al shabaab ayaa looga bartay weerarada nuucaan oo kale ah waxaana shineemo Muqdisho xilliga xalay la qarxinayey gudaheeda ku qayilayey ciidamo katirsan dawlada sida la sheegay taasi oo la ogeyn khasaaraha askarta iyagana soo gaartay.